99 တည်နေရာ Ranch လောက်• Yuri BSF BSF
အနံ့မရှိဘဲတည်နေရာ Ranch လောက် BSF
သင်နှင့်အနီးဆုံးအနံ့မရှိဘဲဘယ်မှာသင်တန်းလောက်လောက်လယ်ယာတည်နေရာနဲ့ခေတ်သစ် bsf ကိုသိလိုပါသလား?
ဘယ်လိုအချည်းနှီးသောယခုသင်ရှိရာမြို့အတွက် dikolom အမျိုးအစား။
စျေးနှုန်းလောက်ရောင်းရဖို့သင့်လျော်သောစိုက်ပျိုး bsf လမ်းလောက်ပြင်ဆင်မှု BSF လှောင်အိမ်, စပါးရိတ်ရာကာလ sd အော်တိုလောက်ထဲကနေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆွေးနွေးကြသည်။
လောင်းသငျသညျ BSF, အသုံးအများဆုံးဖြစ်ခြင်း Self-ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းနှင့် Self-လေ့လာမှုဒါမှမဟုတ်စိုက်ပျိုးလေ့ကျင့်ရေးကိုလိုက်နာဖို့တခြားနည်းလမ်း၏စိုက်ပျိုးမှုသင်ယူဖို့နည်းလမ်းများစွာ။
အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်သင်ယူစိုက်ပျိုးမှုလောက် bsf ၏နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းလမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကို "စတိုင်" သင်နှင့်အတူပါဆုံးလျောက်ပတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အများစုမှာပိုမိုလွယ်ကူဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, အခြို့သောဗီဒီယိုလဲ tutorial ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်ယူဖို့ပိုနှစ်သက်နှင့်ပိုပြီးလယ်ယာအတွက်အလေ့အကျင့်နဲ့တူ။
သင်ဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကတရားဝင်လုပ်ပေးမဆို bsf လောင်းပွုစုပြိုးထော။ ပေးသငျသညျရလဒ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏ဒီမှာရလဒ်များကိုမွေးမြူရေးအစာကျွေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီဆိုပါကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုယင်းလောက်ရောင်းဒေါင်းလုပ်နေကြသည်အပြင်တစ်ဦးလောက်ရှိခဲ့ပွီး။ အဆိုပါ bsf လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး, သငျသညျမြားကိုလညျး katagorikan based စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကေးအတွက်ငါးသားဖောက်မည့်လောက်အပြင်၌။
လောင်းသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအသေးစား (Home-based), အလတ်စား-စကေးနှင့်စက်မှုစကေးသို့ခွဲခြားထားတယ်။ အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ. ကြောင့်မြို့တော်အပြင်, သာတခါသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့မဟုတ်နေအိမ်အပေါ်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်မိုးသည်းထန်စွာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စေသင်ပထမဦးဆုံးလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး BSF ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနားလည်ကြောင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
သေးတစ်ခုတည်းနေ့၏တဦးတည်းကီလိုဂရမ်သငျသညျအရသည့်အခါ grasa pingin အကြံပြုမဟုတ်, သင့်အတိတ်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူနေသောနှစ်ခုနှင့်သုံးအလျင်အမြန်တစ်နေ့တဦးတည်းတစ်တန်ရိတ် grusu, သံသရာတဦးတည်းရှိနေစဉ်လူနာဖြစ်ပေးပါ။
ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ရည်ရွယ်ထားမှအဆင်ပြေမယ့်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျကိုယ်ပိုင်များ၏စွမ်းရည်, ပစ္စည်း, အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအထောက်အပံ့ကိုမှချိန်ညှိ။
သင်ကသင့်ကိုယ်သင်သင်ယူဖို့ likes သူအမျိုးအစားဆိုရင်တစ်ဦးလောက် BSF က start ကနေစျေးကွက်နှင့်ရောင်းကလောင်ဖို့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ
ဘယ်လိုလောက်ဒါ Feed ပြင်ဆင်ထားရန်
(ခေါက်ဆွဲလောက်, ဂျုံလောက်, တောင့်လောက်)
Magot စျေးကွက်ရှာဖွေရေး BSF
တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအလေ့အကျင့်ဆိုဒ်များအတွက်တိုက်ရိုက်ကို Select လုပ်ပါ
အနံ့မရှိဘဲလောက်ခေတ်သစ် BSF ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပိုတည်နေရာရှိပါတယ် 99
သို့သျောလညျးသငျသညျ ပို. လက်တွေ့ကျပြီးချက်ချင်းရလဒ်အတွက်သင်ယူဖို့ပိုနှစ်သက်လျှင်။ သင်နှင့်အနီးဆုံးမြို့အတွက်လယ်ယာအလေ့အကျင့်မှာတိုက်ရိုက်လာရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ရုံအနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် BSF လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးလေ့အကျင့်သင်ယူဖို့အနီးဆုံးမြို့ကိုရွေးပါ။
အလတ်စားနှင့်အကြီးစားပိုးတိရစ္ဆာန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်, သင်တန်း, သငျသညျ ပို. ပင်ရင့်ကျက်သည်မိမိအမှုအရာပြင်ဆင်ထားရန်ရှိသည်နှင့်ကောင်းစွာစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျအဘယ်သူမျှမကျိုးနွံအလတ်စား-စကေးမွေးမြူရေးလောက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ကြိုးစားရန်ကြောင့်။ အချိန်, စွမ်းအင်နှင့်အတွေးတစ်ဦးစွန့်ပစ်လိမ့်အပြင်, အခြားဆုံးရှုံးမှု၏ငွေရေးကြေးရေးဖြစ်ကြသည်။
အန္တရာယ်အချက်များ၏ရောက်ရှိခြင်း, ချောချောမွေ့မွေ့ run နိုင်ပါတယ်တကယ်အနံ့မရှိဘဲဒီတော့လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရင့်ကျက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးပြင်ဆင်မှုရှိသင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ဆောင်သွားရန်လျှင်, စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာပြီးတော့မျှမလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ချင်လျှင်, သင်ကအောင်မြင်တဲ့အသင်းကိုဖွဲ့စည်းရန်ရှိသည်။
focus ကို Select လုပ်ပါစီးပွားရေးအမျိုးအစားလောက်
ရေရှည်အဘို့အသငျသညျအနံ့မရှိဘဲခေတ်မီလယ်ယာစိုက်ပျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း BSF တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ တဦးတည်းအချက်ယခုအဘို့နှင့်လာရန်ဆယ်စုနှစ်များစွာအပြေးအတွက်လုံခြုံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်၏တည်ရှိမှုသည်။
သင်ဆဲလောက်ထုတ်လုပ်မှုအနံ့ပါလျှင်, လူအားဖြင့်သရုပ်ပြပြဿနာကိုမဆောင်ခဲ့က fix ။ ယခုပင်လျှင်လုံခြုံရေးအသိမြှင့်တင်ရန်မထားတဲ့အများအပြားလုပ်ငန်းရှင်များလောက်ကြောင့်သရုပ်ပြအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းယခုတံခါးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
- အော်ဂဲနစ်အရည်ဓာတ်မြေသြဇာလူတန်းစား B ကို
အော်ဂဲနစ်အစိုင်အခဲဓာတ်မြေသြဇာတန်း B ကို
လောက် Feed (ခေါက်ဆွဲလောက်, ဂျုံလောက်။ လုံးလေးများလောက်)
စိုက်ပျိုးရေးစက်မှု (အလှကုန်, ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြားစက်ရုံ, Feed Build)
ပတ်ဝန်းကျင် Kita ကိုကြည့်ပါ
ကို Select လုပ်ပါနှင့်စီစဉ်သင်သည်လောက်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား, lah ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ။ ဒါဟာတလျှောက်သွားကျွန်တော်တို့ကိုမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုမရကြဘူး။
သငျသညျပူဇော်ချင်အဘယျသို့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု? ဘယ်လိုဖြန့်ဖြူး? ဘယ်လိုစျေးကွက်လော အဲဒါကို run ပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်များ? ယင်း၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း၏အရောင်းရဆုံးစျေးနှုန်းကဘာလဲ? ငါကဘယ်လိုလုပ်မြှင့်တင်ရန်သလဲ?
လောက်စျေး (SWOT လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း) အသိအမှတ်ပြုရန်
စစ်တမ်းတစ်ခု Make သူသည်သင်၏စျေးကွက် segments များထွက်ရှာရန်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖန်တီး, သင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုပိုးပစ်မှတ်စျေးကွက်ဖြစ်လတံ့သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား။
တစ်ဦးက Business အမည်ရွေးချယ်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အမှတ်ရစရာင်နှင့် BSF လောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းနာမည်တစ်ခုရွေးပါ။
သင့်လုပ်ငန်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့၏အဘယ်မှာရှိမြို့တော်သတင်းရင်းမြစ်? ပုဂ္ဂလိကမြို့တော်သို့မဟုတ်အတူတကွမြို့တော်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်? ရန်ပုံငွေကိုသင်ပုဂ္ဂလိကရန်ပုံငွေ 100% မဟုတ် rencankana လျှင်။
တစ်ဦးက Business Plan ကို Creating
သငျသညျအောင်မြင်ရန်လိုချင်တာတွေ၏ပစ်မှတ်အောင်ကုမ္ပဏီ၏သင့်လောက်, အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၏ဖြစ်စေလျက်, အမြော်အမြင်နှင့်မစ်ရှင်၏ business plan ကို merupaka စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြာပုံနှိပ်,
Plan ကိုမြှင့်တင်ရေးနှင့်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ sharpshooter လောက်ထုတ်ကုန်စသည်တို့ကိုတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခံရဖို့
ကမှတဆင့်လက်ရှိရှုပ်ထွေးဖို့မဂရုတစိုက်သကဲ့သို့, ဂရုတစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ပါ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အနာဂတ်ဦးတည်ချက်နှင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုကြောင်းဒါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်နေရာလောက်မဟာဗျူဟာအရပျကိုရှာကြာလော့။ လွယ်ကူစွာတည်နေရာ transportansinya ရှာဖွေပါ,
သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်မီဒီယာ feed ကိုလောက်နီးကပ်, ပြည့်စုံထောက်ခံမှုအရင်းအမြစ်များနှင့်ရရန်လွယ်ကူအလုပ်အကိုင်ရှိပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအများအပြားကြောင့်သာနာမ၌အားနည်းစေနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ကြဉ်းသောကုမ္ပဏီအတွင်း "လူဆိုးစာရင်းဒြပ်စင်" ၏လုပ်ရပ်မှဒေဝါလီခံသွား၏။
Make ကေ့ BSF Likes
penagkaran ယင်ကောင်အဖြစ် BSF လှောင်အိမ်သူတို့ Hatch နှင့်အမြောက်အမြားအတွက်ကြက်ဥ generate မှမျိုးပွားလာသောအခါ။
Bsf သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော BSF စိုက်ပျိုးမှု၏ချောမွေ့စစ်ဆင်ရေးကိုထောကျပံ့ရန်လိုအပ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။
သင့်လျော်ဝင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ရင် BSF ကြက်ဥ bsf ထုတ်လုပ်ရန်ကူညီရန်နှင့်အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်များ၏မူရင်းကျက်စားရာနေရာပျံသန်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင်စစ်သားပျံသန်းပုံနဲ့တူတဲ့တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်ထူထောင်အပါအဝင် BSF ၏နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, လွယ်ကူချောမွေ့ကူညီပေးပါမည်။
BSF ဝင်းဟာ BSF အဘို့အနှစျသိမျ့ဖန်တီးနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ BSF များကမျက်နှာသာလိုအပ်ချက်လှောင်အိမ်:
အဆိုပါစံပြအရွယ်အစား (အရှည်က x အကျယ် x ကိုအမြင့်နှင့်ခြေလျင်ဝင်း BSF ၏အမြင့်)
အဆိုပါလ်တာနှင့် fittings စိုက်ပျိုးမှု၏ချောမွေ့မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်လည်းအရေးကြီးလှသည်။ : ကဲ့သို့သောအဆိုပါလ်တာနှင့် fittings
အဆိုပါနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်သောက်သုံးသောအရပ်တို့ကိုမ bsf ပျံ,
ရမှတ်ကြက်ဥ incubate နှင့်
တိုးသားလောင်း BioTong ထောက်ပြသည်
လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုမှာငါးနှင့်ကြက် Terk အားထုတ်မှုများအတွက်အစာကျွေးခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှု၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏အထိ 82% ၏မွေးမြူရေးအစာကျွေးခြင်းကုန်ကျစရိတ်ငွေစုဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, အစာကျွေးခြင်းနှင့်လောက်၏အသုံးပြုမှုကိုထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်စုစွန့်ပစ်, မီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်, စျေးကွက်စွန့်ပစ်ကောင်းစွာ-shaped ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွအဖြစ်နီးပါးအခမဲ့မီဒီယာ။
အခြားမီဒီယာနွား၏ခြေး, ဆိတ်, ယုန်, duck, etc ဝက်နှင့်မြင်းငုံးကြက်သားချေးနိုင်ပါတယ်
feed နှင့်မီဒီယာနီးကပ်စွာတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမြင့်ဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုသင် larvae နေကြသည်။
အနံ့မရှိဘဲ BSF လောက်ခေတ်သစ်စိုက်ပျိုးမှုခက်ခဲသည်မဟုတ်, နေတုန်းပဲသင့်လျော်သောစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။ ထို့အပွငျအခါစိုက်ပျိုးပါတပါးတည်းသာကြားပေါက်အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။
ကြက်ဥ BSF hatching မီဒီယာဘာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်တုံနှင့်ဗန်း-shaped သို့မဟုတ်စတုရန်းသေတ္တာများအဖြစ်သေးငယ်တဲ့သေတ္တာများထားရှိပါသည်။
ဤတွင် bsf ကြက်ဥလောင်းသို့သငျသညျအကောင်ပေါက်ပြီးရင် BioTong ပျတိုးဖို့လှုံ့ဆျော ..
အဆိုပါသေသပ်စွာမှဗန်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူကြီးကြပ်မှုနှင့်နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုထားရန် hatching space နဲ့စင်ပေါ်ပြင်ဆင်ပါ။
အလတ်စား-စကေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် BioTong အသုံးပြုမှုတစ်အိမ်မှာစကေးကနေဆက်ဆက်ကွဲပြားသော်လည်းနိယာမ BioTong utuk ရွှေ့ပြောင်း tool ကို prepupa အဖြစ်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်နှင့်အတူအလတ်စားနှင့် BioTong ပွုစုပြိုးထောငယ်ရွယ်လောက်အဖြစ်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်မပါဘဲ2အမျိုးအစားများ BioTong ရှိသည်ဘယ်မှာတူညီတဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။
BioTong အရွယ်အစားသေသပ်စွာသီးနှံကြီးထွားလာချိန်တွင် BioTong ကျယ်စေနဲ့ထည့်သွင်းဖို့မူကြမ်း Organize နှင့်ပွငျဆငျခွငျးတညျးဟူသောပွညျသူပွညျသားရရှိမှုမှချိန်ညှိ။